र्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ हटाएर छवि राम्रो बनाएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा यतिबेला गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । प्रहरीको बढुवामा असन्तुष्टि सतहमा आइरहेका बेला शर्माले उर्जामा कमाएको नाम गृहमा रहँदा बदनामीमा त परिणत हुँदैन ? यस्तो संशय जनमानसमा देखिन थालेको छ ।
गृह मन्त्रालयमा आएपछि तपाईले कार्ययोजना ल्याउनुभयो । र, लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरीको सरुवा बढुवा बाचा गरेअनुसार एक महिनाभित्रै गर्नुभयो पनि । तर, बढुवा सिफारिसमा बरियता मिचियो, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको जिल्ला वा क्षेत्रमा बसेकाले प्राथमिकता पाए भन्ने गुनासा आए । आईजीपी काण्ड सकिएको छैन, फेरि विवाद । किन यस्तो हुन्छ ?
यो कचकचको अर्थ छैन । इतिहासमा पहिलोपटक विना दबाव, निश्पक्ष रुपमा विना आर्थिक चलखेल बढुवा भएको छ । यस्तो बहुदल आएपछि पहिलोपटक भएको हो, प्रहरीको तलसम्मको दर्जाले बुझेको छ ।
अर्को कुरा, मैले आज आएर डीआईजी भर्ती गरेको हो र ? पहिलादेखि नै थिए । कुन भूगोलका थिए एउटा कुरा हो । अर्को, आज म आएर नम्बर दिएको होइन, हिजोकै नम्बरहरु जोडेर बढुवा गरिएको हो ।
यहाँ के भ्रम छ भने मन्त्रीले गर्‍यो होला । होइन, बढुवा दिने समितिले पनि ७ नम्बर मात्र दिन्छ, बाँकी ५/७ वर्षदेखि दिइएको नम्बर हो । डीआईजीलाई एआईजी बनाएको हो, एसएसपीलाई त बनाएको छैन । त्यसैले विधिभित्रै रहेर सरुवा बढुवा भएको छ ।
म के भन्छु भने यो बढुवाले केही व्यक्तिलाई म परिनँ, अन्याय भयो भन्ने महसुस भएको होला तर, संगठनलाई न्याय भएको छ । अवरुद्ध भएर रहेको बढुवाको बाटो खुलेको छ ।
प्रहरी बढुवा आज मात्र होइन, सँधै विवादित हुन थाल्यो । जो बढुवामा पर्दैन, उसले म यसकारण परिन छु भन्ने सर्वस्वीकार्य विधि बनाउन मिल्दैन ?
म अब यो कचकचको अन्त्य गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छु । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल लुकाएर दिने अन्त्य गर्दैछु । अनावश्यक सोसफोर्स लगाएर तक्मा लिने र त्यसलाई जोडेर बढुवा खाने दुर्गममा गएर काम गर्नेले नपाउने प्रचलन अन्त्य गर्दैछु । हिजोको नम्बरलाई जोडेर बढुवा गर्नु पर्ने थियो, गरेँ । तर, अब यहाँ आएपछि देखेका त्रुटीहरु सच्याउँछु ।
उसोभए अब नयाँ आईजीपी छान्दा विवाद हुँदैन ?
पुरानो विधिअनुसार हुँदासम्म त यस्तै यस्तै भइरहन्छ, त्यो मेरो हातमा छैन । तर, प्रष्ट र पारदर्शी विधि बनाएर गर्न गृहकार्य गरिरहेको छु, सबै सुझाव मागिरहेको छु । बढुवामा मात्र समस्या छैन । सरुवामा पनि छ, तालिममा पनि छ । एउटा पटक पटक जान्छ, अर्कोले कहिल्यै पाउँदैन । सबैसँग सुझाव लिएर प्रष्ट नीति बनाउँछु । सापेक्षित रुपले सबैलाई न्याय हुने गरी प्रहरी ऐन बनाउँदैछु ।
प्रहरी संगठन पुनर्संरचनाबारे चाहिँ के सोच्नुभएको छ ?
प्रदेश प्रहरीको अवधारणा हाम्रो संविधानमा छ । प्रहरी संगठनलाई प्रदेशमा पुर्‍याउनुछ, संघमा पनि काम गर्नुछ । त्यसैले नयाँ स्तरबाट प्रहरी संगठन पुनर्संरचना गर्नु छ । यसका लागि पहिला त कानुन चाहिएको छ । यसका लागि छलफल गरिरहेको छु । मूल कुरा के हो भने दिनानुदिनका शान्ति सुरक्षाका काम प्रदेश प्रहरीले नै गर्छ ।
केन्द्रसँग सपोर्ट माग्दा केन्द्रीय प्रहरीले गएर सहयोग गर्छु र गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान, जुन प्रदेशले मात्र गर्न नसक्ला, त्यो केन्द्रीय प्रहरीले गर्छ । नीति निर्माणमा अलिबढी केन्द्रीय प्रहरी व्यस्त हुन्छ । यही सेरोफेरोमा छलफल भइरहेको छ तर, अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं ।
निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारहरु पनि बनेका छन्, स्थानीय तहमा नगर प्रहरीको पनि कल्पना गरिएको छ । यसमा केही गृहकार्य छ ?
संविधानले नगर प्रहरी बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यसैले पालिकाहरुको न्याय समितिले गर्ने कामकारवाही कार्यान्वयन गर्न त्यो नगर प्रहरीको परिकल्पना गरिएको हो ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नगर प्रहरी बनाउला । तर, प्रदेश प्रहरीका इकाईहरु हरेक गाउँपालिकामा हुन आवश्यक छ । समग्र शान्ति सुरक्षा र अपराध सम्बन्धी ममिलाका विषयहरु प्रदेश प्रहरीकै जिम्मेवारी हुन्छ ।
गृहमन्त्रीलाई भेटेपछि स्थानीय चुनावबारे कुरा नगर्दा अपूर्ण होला । माघ ७ को डेडलाइन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ । प्रदेश र संसदको चुनाव त समयमै गर्ला नि सरकारले होइन ?
संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि माघ ७ गते त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतितिनिधि गठन भइसक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशसभा नभएसम्म हुँदैन ।
यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार माघ ७ मा सक्ने हो । (हाँस्दै) हुन त हामी असारमा पनि चुनाव गर्न सक्ने भइसक्यौं तर, पनि पुसमा निर्वाचन गर्न भौगोलिक कारणले अप्ठ्यारो छ । यसैले मंसिरभित्रै चुनाव गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यतिबेलै गर्ने भन्ने त छैन तर, अन्तिम निर्वाचन (संघीय संसदको चुनाव) मंसिरभित्रै गरिसक्नु पर्नेछ । हामीसँग समय कम छ । निर्वाचन आयोग, सरकार र जनता तयार हुने हो भने सबै सम्भव छ ।
आयोग र जनता तयार होलान् । तर, सरकार तयार देखिएन । क्षेत्र निर्धारण आयोग बल्ल-बल्ल बनेको छ, निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन कानुन अझैसम्म बनिसकेकै छैन
क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई २१ दिनको समय दिइएको छ । त्यसअनुसार नै काम हुन्छ । निर्वाचनसम्वन्धी ऐनहरु मैले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेँ, आजभोलिबाटै छलफल सुरु हुन्छ । छोटो तरिकाले अघि बढाउँछौं । राष्ट्रियसभा गठनका लागि आवश्यक ऐन कानुनको ड्राफ्ट बनिरहेको छ । अन्य ऐनको पनि तीव्र गतिमा तयार भइरहेको छ ।
यो सरकारको मुख्यः एजेण्डा भनेकै चुनाव हो, सबै चुनाव हुन्छ । ढुक्क हुनुस्, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सबैको चुनाव हुन्छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपटक गर्ने कि छुट्टाछुट्टै ? के छ सरकारको सोच ?
अहिले मैले यसो भन्न सक्दिनँ । निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले निर्णय गर्छ । तर, कसरी छिटो, छरितो र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा निर्णय हुन्छ ।